Masinina fonosana atody fiompiana
Masinina fonosana atody kely Mintai dia ampiasaina betsaka amin'ny toeram-piompiana akoho (na gana) sy ny zavamaniry fanodinana atody. Raha misy fitakiana hafa azonao atao dia azo ampiasana miaraka amin'ny mpanasa atody, fanamainana atody, labozia, na mpiompy atody. Ahena ny vidin'ny asa. Izy io dia namboarina tamin'ny toetran'ny tsotra, azo antoka, malefaka ary matanjaka, mora ampiasaina sy tazomina.
MESINY FAMONJENA EGG
Masinina fonosana atody Mintai dia be mpampiasa amin'ny toeram-piompiana akoho (na gana) sy ny zavamaniry fanodinana atody. Izay mety amin'ny karazan-dabilio samihafa. Ahenao ny vidin'ny mpiasa ary manatsara ny fahombiazan'ny asa. Izy io dia namboarina tamin'ny toetran'ny tsotra, azo antoka, malefaka ary matanjaka, mora ampiasaina sy tazomina.
Milina fanasokajiana sy fanangonana atody
Ny milina atody sy ny fonosana atody dia mifandray amin'ny rafitra fanangonana afovoan'ny atody an'ny mpanjifa, na azo ampifandraisina amin'ny masinina fanasan-atody, fanamainana atody, fanamorana UV, fanosorana solika, na labozia atody. Miaraka amin'ny fahaizana manomboka amin'ny 30,000eggs / h ka hatramin'ny 60,000eggs / h.
MT-110D Masinina fametahana grady atody
Ny fametahana ny atody sy ny masinina fanangonana ny atody foy na ny atody vaovao, dia afaka atody mandeha ho azy avy eo amina fonosana amin'ny milina iray.
Ny famaohana ny fanaovana atody sy ny milina famonosana ho an'ny atody foy, dia afaka mahazo grady mandeha ho azy avy eo amina fonosana iray.
Amin'ny alàlan'ny tsanganana iray manontolo amin'ny fitaterana lohan'ny atody hanitsiana, mba hiantohana ny lohan'ny atody hiakatra ambony, hiantohana ny fihavanan'ny fitahirizana atody.
Masinina fonosana atody Mintai dia be mpampiasa amin'ny fambolena akoho (na gana) sy ny zavamaniry fanodinana atody. Ahena ny vidin'ny asa. Izy io dia namboarina tamin'ny toetran'ny tsotra, azo antoka, malefaka ary matanjaka, mora ampiasaina sy tazomina.
a) ity masinina ity dia azo ampifandraisina amin'ny rafitra fanangonana atody afovoany na ny tsipika famokarana fanadiovana atody. b) ny lanjan'ny atody sy ny fonosana ho azy no amaritana azy, ary manitsy ny ampahany betsaka, tsara amin'ny fitehirizana atody; c) Fandidiana efijery mikasika, azo apetraka amin'ny ambaratonga samihafa amin'ny lanjany, hatramin'ny kilasy 6. d) mety amin'ny 6 * 5 = 30 lovia taratasy na valizy plastika e) azonao atao ny misafidy ny fandefasana mandeha ho azy na ny fandefasana tanana
Masinina fanoratana atody elektronika
Masinina fanoratana milanja elektronika atody, azo apetraka amin'ny ambaratonga samihafa amin'ny lanjany sy ny statistikan'ny isan'ny ambaratonga, ny efijery sy ny fibaikoana ny efijery, mety sy azo ampiharina.
Hatching atody Packer, Masinina manasokajy sy milina fanangonana, Masinina mamaky atody mandeha ho azy, Masinina fonosana atody, Mpanamboatra masinina mamaky atody, Masinina manendaka atody nandrahoina,